A NA-AKỌWA DISK DISKI DỊKA RAW, Ọ BỤ EZIE NA A NA-AHAZI YA. IHE Ị GA-EME - DISK - 2019
A na-akọwa disk diski dịka RAW, ọ bụ ezie na a na-ahazi ya. Ihe ị ga-eme
Nke a bụ otu i si arụ ọrụ na diski ike, ọrụ, ma na mberede na-agbanye kọmputa ahụ - ma ị hụ foto ahụ na mmanụ: enweghị usoro, usoro RAW, enweghị faịlụ ọhụụ ma ị nweghị ike idetuo ihe ọ bụla na ya. Kedu ihe ị ga - eme n'okwu a (Site n'ụzọ, enwere ọtụtụ ajụjụ dị iche iche, na isiokwu nke isiokwu a ka a mụrụ.)?
Ọfọn, nke mbụ, atụla egwu ma ghara ịla ọsọ, ma ekwetaghị na atụmatụ Windows (ọ gwụla ma, ị maghị 100% ihe ndị a ma ọ bụ arụmọrụ ndị ọzọ). Ọ ka mma ị gbanyụọ PC gị maka oge (ọ bụrụ na ịnwe ike mbanye siri ike, kpochapụ ya na kọmputa gị, laptọọpụ).
Ihe kpatara usoro faịlụ RAW
Usoro faịlụ RAW pụtara na disk adịghị akara (ya bụ, "raw" ma ọ bụrụ na a sụgharịrị ya n'ụzọ nkịtị), akọwapụtaghị faịlụ ahụ na ya. Nke a nwere ike ime maka ọtụtụ ihe kpatara ya, mana ọtụtụ mgbe ọ bụ:
ike na-agbagha ngwa ngwa mgbe kọmputa na-agba ọsọ (dịka ọmụmaatụ, gbanyụọ ọkụ ahụ, ma gbanwee ya - kọmputa amalitegharịrị, mgbe ahụ, ị ​​na-ahụ diski RAW na aro ka ịzie ya);
ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu banyere draịvụ ike mpụga, ha na-emekarị nke a mgbe ị na-edepụta ozi ha, kwụpụ eriri USB (atụ aro ya: mgbe niile tupu ịkwụpụ eriri, na tray (na-esote elekere), pịa bọtịnụ iji kwụpụ disk ahụ n'enweghị nsogbu;
mgbe ọ naghị arụ ọrụ nke ọma na mmemme maka ịgbanwere mgbanwe nke nkwekọrịta siri ike, nhazi ha, wdg.
Ọzọkwa, ọtụtụ mgbe, ọtụtụ ndị ọrụ na - ejikọta ha na draịvụ ha na TV - ha na - etinyere ha n'usoro ha, mgbe ahụ PC enweghị ike ịgụ ya, na - egosi usoro RAW (iji gụọ ụdị diski, ọ ka mma iji ọrụ pụrụ iche nwere ike ịgụ usoro faịlụ diski nke a na-ahazi ya na TV / TV prefix);
mgbe ị na-etinye nje virus na PC;
ya na mmekorita nke aru "nke anu aru" (oga adighi ele anya na ihe nwere ike ime ya n'onwe ya iji "zoputa" data)
Ọ bụrụ na ihe kpatara usoro faịlụ RAW bụ mmechi na-ekwesịghị ekwesị nke diski (ma ọ bụ ike, nkwụsịghị mma nke PC) - n'ọtụtụ ọnọdụ, a ga-enweta data ahụ n'enweghị nsogbu ọ bụla. N'ọnọdụ ndị ọzọ - ohere ndị dị ala, ma ha nọkwa ebe ahụ :).
Isi 1: Windows akpụkpọ ụkwụ, data dị na diski adịghị mkpa, dịka iji weghachite ngwa ngwa
Ụzọ kachasị mfe na nke kachasị mfe iji wepụ RAW bụ ịkọwa diski ike n'ime usoro faịlụ ọzọ (kpọmkwem ihe Windows na-enye anyị).
Ntị! N'oge nhazi, a ga-ehichapụ ozi niile sitere na diski ike. Kpachara anya, ma ọ bụrụ na ị nwere faịlụ ndị dị mkpa na diski - a gaghi akwado ya.
Ọ kachasị mma ịkpụpụta diski site na usoro nchịkwa diski (ọ bụghị mgbe niile ma ọ bụghị diski niile dị na "kọmputa m", yana na nchịkwa diski ị ga-ahụ ozugbo niile nkesa niile).
Iji mepee ya, gaa na Ogwe Njikwa Windows, mepee akụkụ "System na Nche", wee banye mpaghara "Nchịkwa" wepu njikọ "Mepụta na Mpeepe Diski Ike" (dika dị na Ọgụgụ 1).
Fig. 1. System na nche (Windows 10).
Na-esote, họrọ disk nke usoro faịlụ RAW bụ, ma dezie ya (naanị ịkwesịrị iji aka nri pịa ibe nke disk, wee họrọ "Nhazi" nhọrọ site na menu, lee fig 2).
Fig. 2. Ịkpụpụta diski na Ex. diski.
Mgbe nhazi, disk ga-adị ka "ọhụrụ" (na-enweghị faịlụ) - ugbu a, ị nwere ike dee ihe niile ịchọrọ na ya (nke ọma, agbanyeghị ọkụ ọkụ eletrik).
Isi nke 2: akpụkpọ ụkwụ Windows (faịlụ RAW abụghị na diski Windows)
Ọ bụrụ na ịchọrọ faịlụ na diski, mgbe ahụ, ịkpụpụta diski na-ada mbà! Mbụ ị ga-achọ ịnwale disk maka njehie ma dozie ha - na ọtụtụ mgbe, disk ahụ malitere ịrụ ọrụ dị ka ọ dị na mbụ. Tụlee usoro nzọụkwụ.
1) Nke mbụ gaa na njikwa disk (Ogwe njikwa / System na Nche / Nchịkwa / Ịmepụta na Ịhazi usoro ihe egwu siri ike), lee n'elu na isiokwu.
2) Cheta akwụkwọ mpịakọta nke ị nwere usoro faịlụ RAW.
3) Gbaa ọsọ ọsọ ọsọ dị ka onye nchịkwa. Na Windows 10, a na-eme nke a: pịa aka nri na menu Malite, na na menupụtapụta, họrọ "Nye iwu ngwa ngwa (nchịkwa)".
4) Nke abia, tinye iwu "chkdsk D: / f" (lee fig. 3, kama D: - tinye akwụkwọ mpịakọta gị) wee pịa Tinye.
Fig. 3. nlele disk.
5) Mgbe iwebata iwu - kwesiri ịmalite ịlele ma dozie njehie, ọ bụrụ na ọ bụla. Ọtụtụ mgbe, na njedebe nke ule ahụ, Windows ga-agwa gị na edoziwo njehie ma ọ dịghị ihe ọzọ a chọrọ. Ya mere ị nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ na diski ahụ, usoro faịlụ RAW na nke a na-agbanwe ihe ochie gị (na-abụkarị FAT 32 ma ọ bụ NTFS).
Fig. 4. Ọhiehie (maọbụ ka ha gbazie) - ihe nile dị n'usoro.
Isi nke 3: Windows adịghị buut (RAW na diski Windows)
1) Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na enweghị mgbakwunye disk (flash drive) na Windows ...
Na nke a, enwere ụzọ dị mfe: wepụ dọrọ ike site na kọmputa (laptọọpụ) ma tinye ya n'ime kọmputa ọzọ. Mgbe ahụ na kọmputa ọzọ, lelee ya maka njehie (lee n'elu na isiokwu) ma ọ bụrụ na agbazi ha - jiri ya na-aga n'ihu.
Ị nwekwara ike ịhọrọ nhọrọ ọzọ: weghaara diski akpụkpọ ụkwụ nke onye ma wụnye Windows na disk ọzọ, wee buo ya ka ịlele ihe akara dị ka RAW.
2) Ọ bụrụ na ikuku nwụnye bụ ...
Ihe niile dị mfe :). Akpa, anyị buuru ya, na kama ntinye ahụ, anyị na-ahọrọ usoro mgbake (nke njikọ a na-adị mgbe nile na nkuku aka ekpe nke windo na mmalite nke nwụnye, lee fig 5).
Fig. 5. Nweghachi usoro.
Ọzọkwa n'etiti ndi nchịkọta nhọrọ chọta akara iwu ma mee ya. N'ime ya, ọ dị anyị mkpa ịmegharị ego na diski ike nke arụnyere Windows. Otu esi eme ya, n'ihi na akwụkwọ ozi agbanweela, n'ihi na Ànyị na-esi na flash drive (nrụnye diski)?
1. Dị mfe: ịmalite ịpịpụta akara site na akara iwu (iwu ntinye ma lelee ya nke na-ebugharị na nke akwụkwọ ozi.) Cheta akwụkwọ mpịakọta nke ị wụnye Windows).
2. Mechie ihe ntinye ma malite nyocha ahụ ụzọ ama ama: chkdsk d: / f (na ENTER).
Fig. 6. Iwu iwu.
Site n'ụzọ, a na-agbanwekarị akwụkwọ edemede nke 1: i.e. ọ bụrụ na usoro diski bụ "C:", mgbe ahụ mgbe ị na-esi na diski ike, ọ na-aghọ akwụkwọ ozi "D:". Mana nke a abughi mgbe niile, enweghi ihe ozo!
Ọ bụrụ na usoro ndị a adịghị enyere aka, ana m akwado ka ị mara TestDisk. Ọtụtụ mgbe, ọ na-enyere aka iji dozie nsogbu na draịva siri ike.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepu data ehichapụrụ na disk diski (ma ọ bụ draịvụ), ana m akwado ka ị mara onwe gị na ndepụta nke usoro mmemme mgbapụta kachasị ama: (ghaghị iburu ihe).
Ihe kacha mma!
Esi wepu akwukwo okwu na YouTube
Windows 10 na keyboard ihuenyo
Họrọ draịvụ ike. Kedu hdd bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi, ihe ika?
Ihichapụ ibe na Odnoklassniki
Gbanwee ọkụ na V-Ray na 3ds Max
Ndị ọrụ Windows 10 nwere ike ịchọta nsogbu: ịma ọkwa mgbe niile na "Enweghị ohere ohere disk ohere ohere disk na-agba ọsọ. Pịa ebe a iji hụ ma ị nwere ike ịhapụ ohere na diski a." Imirikiti ntụziaka maka otu esi ewepụ "ngosi ezughị oke disk" ga-agbada na esi ehichapụ diski (nke ga-abụ ikpe na ntụziaka a). GụKwuo
Nkà maka igwe
Ịwụnye ọkwọ ụgbọala maka nkwụnye Wi-Fi TP-Link TL-WN721N